Maalin: Janaayo 19, 2020
Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ku aadan yareynta cufnaanta taraafikada ee magaalada. Baaxadda shaqada ay bilaabeen Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, ballaarinta iyo cusboonaysiinta ayaa laga fulin doonaa isgoysyada ku yaal degmada Altınordu. Marka la eego baaxadda daraasadaha, Dowladda Hoose [More ...]
Magaalo-weynta laga soo bilaabo Zincirlikuyu iyo Avcılar waxay ku dhufatay isgoyska hortiisa horjoogsiga Okmeydanı. In kasta oo darawalka metrobus uu ku dhaawacmay shilka, rakaabku waxay la kulantay argagax weyn. [More ...]
“Aqoon-isweydaarsiga Dalxiiska” oo ay soo qaban qaabisay IOM Dalxiiska Dalxiiska ayaa la qaban doonaa berrito. Aqoon isweydaarsiga, halkaas oo Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu uu ka qeyb geli doono fadhiga qiimeynta, dalxiiska Istanbul ayaa laga wada hadli doonaa. Waxaa lagu aasaasay hoos imaadka Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu, 'Istanbul [More ...]
Akadeemiyada Isbeddelka Shirkadaha, oo dejisa ujeeddada laga leeyahay in la siiyo adeegyada la-talin ee ugu kalsoon ee shirkadaha loogu talo galay in lagu horumariyo sii jiritaanka shirkadda iyo isku-duubnaan, oo isbeddel ku sameysa Isbaddelada Ardeyda, ayaa sii wata shirarka wadaagga ee warshadaha. [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka hadlay Mashruuca Midawga Wadada Diyaaradaha ee Magaalada Gayrettepe-Istanbul. Erdogan Dooni inaan ninna mashruuca, waxay u yaqaanaan Turkey ee 17kii sano ee la soo dhaafay taariikhda mashaariicda ugu weyn, mashaariicdaas [More ...]
Iyada oo ay iskaashanayaan dawlada hoose ee Magaalada Izmir, TARKEM iyo Mu'asasada Izmir, Seminaariga Taariikhiga ee Izmir Wadooyinka Taariikhda ayaa la abaabulay maanta. Natiijooyinka laga helay aqoon isweydaarsiga, oo magacyo takhasus leh ay kaqeybgaleen, waxaa lagu qiimeyn doonaa qorsheynta wadada taariikheed. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, TARKEM [More ...]
Taariikhda khadka tareenka ee Mersin Adana ayaa ku bilaabay xaflad. 19kii Janaayo 1884 Shirkada Tareenka ee Tasaloniya-Manastır Ottoman waxaa la asaasay iyadoo la qaatay qawaaniinta gudaha. Magaalada caasimada ah, xaruntiisuna waa Istanbul, waa 19 jir. [More ...]